Global Voices teny Malagasy » NETmundial 101: Fanomanana ny amboara eran-tany ho an’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Oktobra 2019 8:47 GMT 1	 · Mpanoratra Marianne Diaz Nandika (fr) i Amadou Lamine Badji, miora
Sokajy: Brezila, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Nanaraka mivantana ny NETmundial  ho an'ny Advox i Marianne Diaz sy Sarah Myers, izy io izay zaikabe iraisam-pirenena momba ny fitantanana ny Aterineto, natao ny 23 sy 24 Aprily tao Sao Paolo, Brezila. Niara-nivondrona tao daholo na ny fiarahamonim-pirenena, na ireo orinasa, na ireo mpisolotena ny governemanta manerana izao tontolo izao, mba hitafa momba ny hoavin'ny fitantanana ny aterineto taorian'i Snowden. Anatinà fizaran-dahatsoratra  momba io hetsika io ity lahatsoratra ity.
Ny somary mahagaga dia nisy drafitr'ireo fitsipika ireo sy “tondrozotra” iray ho an'ny famolavolàna io tontolo io navoaka ny herinandro lasa teo ary mbola misokatra ho an'ny fanehoankevitra izy io . Niteraka adihevitra ny sasany tamin'ireo fisehony – toy ny fandavana ny fiteny hoe “tsy fitanilàn'ny aterineto” sy ny fanovàna azy aminà fiantsoana teknika kokoa, sy tsy dia mitodika loatra amin'ny zon'olombelona, hoe “principe de bout-en-bout ” – na teo aza ireo adihevitra lava sy mafana momba ny toejava-misy amin'ilay tambajotra sy ny fitantanana azy.
Raha maro ireo mihevitra fa mety hampisy fiovàna goavana eo amin'io adihevitra io ilay fivoriana — amin'ny fotoana izay hankalazan'ny Aterineto ny faha-25 taonany sy ny fanaovana antso eran-tany ho an'ny fanambaràna ny Zon'ny Aterineto — misy ihany koa ny ahiahy kely eo amin'ny fahafahan'ito fihaonana ito hanome vahaolana azo tsapain-tànana. Tsy resy lahatra ny amin'ny maha-ilaina ny fanampiana fanambaràna fanampiny tsy misy hery mpanatanteraka akory manoloana ny zavamisy ankehitriny ireo mpandinika sasany. Tanatinà lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Mitadiava fomba fiteny ho an'i Brezila: ny fisoloana tena sy ny ara-drariny anatin'ny fitantanana ny Aterineto ” (rohy maty), namoaka hevitra ireo manampahaizana momba ny fiantanana ny Aterineto, Milton Mueller sy Ben Wagner, fa mety ho “famerimberenana ireo adihevitra taloha” fotsiny ihany io fivoriana io:
Kanefa miaraka amin'ny fanekena ny ‘Marco Civil’ farany teo , ilay atao hoe “Fanambaràna ny Zon'ny Aterineto” nataon'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka Breziliana, fara-faharatsiny i Brezila toa miresadresaka momba ny kiondalana ampiova tanteraka ny fiarovana ny zon'ireo mpampiasa. Miaraka aminà lalàna mihatra hifehy ny aterineto an-dàlam-panekena, manisy lanjany bebe kokoa ny adihevitra ny anjara asan'i Brezila amin'ny maha-mpampiantrano sy mpampiroborobo ny NETmundial azy.
Na dia voalaza  aza fa “valinteny an-katezeran'izao tontolo izao manoloana an'i Etazonia noho ny fandraisany anjara anatin'ny fitsikilovana niomerika” ny NETmundial, navoitran’ ireo mpikarakara ny fivoriana tsara fa “tsy hanao resaka na hetsika hanolorana vahaolana amina lohahevitra voafaritra mazava toy ny fiarovana, ny fiainana manokana, ny fanarahamaso, sns” io fihaonana io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/06/143253/
 navoaka ny herinandro lasa teo ary mbola misokatra ho an'ny fanehoankevitra izy io: http://document.netmundial.br/1-internet-governance-principles/
 principe de bout-en-bout: https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_bout_en_bout
 Mitadiava fomba fiteny ho an'i Brezila: ny fisoloana tena sy ny ara-drariny anatin'ny fitantanana ny Aterineto: http://www.global.asc.upenn.edu/fileLibrary/PDFs/MiltonBenWPdraft_Final.pdf
 fanekena ny ‘Marco Civil’ farany teo: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2014/03/26/advocates-hail-brazils-constitution-for-the-internet-marcocivil/
 ivontoerana fandraisana anjara lavitra : http://netmundial.br/remote-participation/